Nidaamyada Cobia: Warbaahinta Bulsheed ee Si Buuxda U Otomaatiga ah iyo Isugeynta | Martech Zone
Nidaamyada Cobia: Warbaahinta Bulsheed ee Si Buuxda Uwada Iswada iyo Iskuxirka
Dunida suuqgeynta ayaa si aad ah isugu badashay da'da ilaha dhijitaalka ah iyo warbaahinta bulshada. Iyadoo daadadka xalalka la heli karo maanta, ilaha xirfadlayaasha si ay u muujiyaan saameyn badan ayaa ku jira heerkii ugu sarreeyay. Qalabyo badan ayaa bixiya ilo iyo adeegyo ganacsi, laakiin waxa kaliya ee aysan bixin waa nidaam kaa caawinaya inaad macaamiishaada ka hesho xilligan ay tilmaamayaan baahi.
Nidaamka Cobia waxay soo saartay nidaam loogu talagalay in lagu beddelo ciyaarta sida ganacsiyada ay macaamiisha u gaarsiiyaan. Markii aad isdiiwaangeliso, meheraddaadu waxay heli doontaa bog soo degitaan soo jiidasho leh, waxaana lagu qori doonaa galka buugaggooda iyo sidoo kale Goobaha Google.
Cobia Systems Kormeerka Bulshada
Si toos ah bogga hore ee dashboardkaaga, milkiilayaasha meheradaha waxaa la siiyaa qalab lagu qiimeeyo wada sheekaysiga shabakadooda, oo ay ku jiraan macaamiisha suurtagalka ah isla markaaba markay caawimaad raadsadaan. Nidaamkoodu wuxuu kuxiran yahay macluumaadka khabiirka - milkiilaha ganacsiga - inuu bartilmaameedsado weedho khuseeya ganacsigooda. Ka dib markii la geliyo ereyada muhiimka ah, tani waxay dejineysaa Nidaamka Cobia ee loogu talagalay qaabka suuq geynta buuxda.
Qiyaas macmiil tweeting ku saabsan sida gaabiska xariiqda ugu jirto goobtaada ganacsi, ka dibna awood u yeelo inuu isla markiiba uga jawaabo kuubon iyo raaligelin si uu uga caawiyo dhibaatadooda. Fursaduhu miyaanay u furi doonin meheraddaada?
Ganacsi iibinta baabuurta ayaa aqoonsan kara mid ka mid ah ereyada ugu caansan ee baraha bulshada, Waxaan rabaa gaari, oo leh jawaab loogu talagalay macaamilka iyada oo ku saleysan tirakoobyadooda - tani waa hawlgal shakhsiyeed oo loogu talagalay dhageystayaashaada bartilmaameedka ah. Inaad xakamayso waxa dadku kaa sheegaan adiga iyo ganacsigaagaba waa xudunta maaraynta sumcadda, taas oo nidaamkoodu ku dhiirrigeliyo wacyigelin iyagoo si fudud ugu jawaabaya boostada isticmaalaha.
Cobia Systems Maqaalka Isuduwaha
Qayb muhiim ah oo ka mid ah la xiriirka macaamiishaada waa iyadoo la ilaaliyo mowduucyada wadahadalka ee ugu dambeeyay. Muuqaalka isuduwidda maqaalka Cobia waxaa lagu dhisay adiga oo maskaxda ku haya adoo ka raadinaya shabakadda sheekooyinka ugu habboon ee ku saleysan ereyada muhiimka ah ee ku habboon.
Maaddaama ay tahay otomaatig ahaan shirkad ahaan waxyaabaha ay ka kooban tahay asalka ah, qodobbadaani waxay saf u gali doonaan shaandhayntaada gaarka ah, ka dibna waxay ku dhejin doonaan darbigaaga Facebook ama Twitter lix saac gudahood. Waxqabadka ku saabsan maqaalladaan caanka ah ee isbeddelaya, ee aad adigu baartid, ayaa markaa laguu arki doonaa shabakadda macmiilkaaga, iyadoo si muuqata u kordheysa gaaritaanka shirkaddaada.
Xayeysiinta iyo aqoonsiga astaanta ayaa ah qodob go aan ka qaata soo jiidashada ganacsi cusub iyo ilaalinta macaamiisha hadda jirta. Adkaysigu wuxuu dhalaa natiijooyinka, gaar ahaan markay macaamiisha ogaadaan inuu jiro heshiis ku lug leh. Xayeysiintu labaduba waxay soo jiitaan macaamiil cusub iyo sidoo kale inay dib u hantaan macaamiishii hore.
Ololayaasha Cobia Systems
Iyadoo Nidaamka Cobia'Muuqaalka ololaha, macaamiishaadu waligood kama maqnaan doonaan garaacida shirkaddaada. Qaab-dhismeedkooda dhexdiisa, waxaad ku abuuri kartaa ololeyaal suuq-buuxa ah oo ay ku jiraan sharraxaad iyo wacitaan-ku-dhaqaaq sida koodh xayeysiin ah. Adiga ayaa xakamayn doona inta ololahaagu socdo iyo cidda ku gaadhsiinaysa qaraxaaga masaafada ugu fog. Cobia, adeegsadayaashooda ayaa leh khibrad u leh kororka 100% ilaa 3,400% ee kuwa raacsan bogaggooda ganacsi iyagoo adeegsanaya ololahooda.
Cobia Systems waxay ku siineysaa aalado aad si hal abuur leh uga fikirto, waxay kuu sahleysaa howlahaaga suuqgeynta maalinlaha ah hal madal, waxayna ku siineysaa natiijooyin bartilmaameed aan xadidneyn oo lagu hagaajinayo gaarsiintaada. Maxay tahay inay macaamiishaadu kuu raadiyaan? Waa inaad heshaa iyaga. Devan Sharma - Agaasimaha Guud iyo Aasaasaha Cobia Systems
Xirfadlayaal ka tirsan warshadaha suuq geynta ayaa kormeeri doona waxa ay dadku ka yiraahdaan astaantaada suuqa dijitaalka ah iyo sidoo kale inay daawadaan isbeddellada iyo isbeddelada tartanka si loo hubiyo in astaantaadu ay sii soconeyso oo ay la kulanto dhammaan arrimaha adeegga macaamiisha. Xayeysiintu waxay kuu oggolaaneysaa inaad la xiriirto astaantaada oo aad u soo jiido baahiyaha hadda jira ee macaamiisha istiraatiijiyadda suuqa ee maalinlaha ah ee iibka. Hal-abuurkaaga iyo qalabkaaga si aad u maamusho sumcaddaada internetka ayaa looga baahan yahay in laga hortago waxyaabaha duugoobay iyo waxa keli ah ee duqeymaha sii kordhaya ee ololayaasha xayeysiinta ah
Tags: Isugeynta maqaalkaisgaarsiinta bulshadanidaamyada cobiaDevan Sharmatusahaganacsiga googlewarbaahinta bulshadakormeerka warbaahinta bulshadakormeerka bulshada
Macluumaad Macluumaad Leh Sabab Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Diirada Saarto Mobilka
Smallpdf: Beddelaad Bilaash ah iyo Isku-xoqid PDF Utility